နာမညျကွီး ဘောလုံးအသငျး တဈသငျးလုံး စဈထဲဝငျကာ လကျနတျပွောငျးကိုငျခဲ့ကွပါပွီ…. – Alanzayar
နာမညျကွီး ဘောလုံးအသငျး တဈသငျးလုံး စဈထဲဝငျကာ လကျနတျပွောငျးကိုငျခဲ့ကွပါပွီ….
ယူကရိနျး နာမညျကြျော ကလပျ ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျးက ယူကရိနျး ကစားသမားတှဟော သူတို့ရဲ့ ဘောလုံးအားကစား ဝတျစုံတှကေို ခြှတျပွီး စဈတပျ ယူနီဖောငျးကို ပွောငျးလဲ ဝတျဆငျခဲ့ကွပွီ ဖွဈပါတယျ။ ယူကရိနျးလိဂျမှာ ကစားနတေဲ့ နိုငျငံခွားသား ကစားသမားတှဟော နီးစပျရာ နိုငျငံတှထေဲကို ထှကျခှာခဲ့ကွပွီး ယူကရိနျး ကစားသမားတှေ ကတော့ တိုငျးပွညျတှငျးမှာ ကနျြနရေဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျးက ယူကရိနျး ကစားသမားတှေ ကတော့ တိုငျးပွညျကို ကာကှယျပေးမယျ့ သူတှအေဖွဈ အသှငျပွောငျး ခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒိုငျနမိုကိဗျအသငျး နညျးပွကတော့ ရိုမေးနီးယား နိုငျငံသား ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူကလညျးပဲ သူ့ရဲ့ မိခငျတိုငျးပွညျကို မပွနျဘဲ ယူကရိနျး မှာသာ ဆကျလကျ ရှိနကော သူက သူရဲဘောကွောငျသူ မဟုတျဘူးလို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒိုငျနမိုကိဗျနညျးပွ မာဆီယာလူဆကျကူဟာ အသကျ ၇၆ နှဈအရှယျရှိ နပွေီဖွဈပွီး ဒီစဈပှဲကို ဆနျ့ကငျြနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုအခါ သူ့ တပညျ့ကြျောတှကေလညျး ဘောလုံးကနျ ဖိနပျတှကေို စှနျ့ကာ သနေတျထမျးပွီး အမိမွကေို ကာကှယျပေးမယျ့သူ တှအေဖွဈ ရှိနခေဲ့ကွပွီ ဖွဈပါတော့တယျ။ Credi
နာမည်ကြီး ဘောလုံးအသင်း တစ်သင်းလုံး စစ်ထဲဝင်ကာ လက်နတ်ပြောင်းကိုင်ခဲ့ကြပါပြီ….
ယူကရိန်း နာမည်ကျော် ကလပ် ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းက ယူကရိန်း ကစားသမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘောလုံးအားကစား ဝတ်စုံတွေကို ချွတ်ပြီး စစ်တပ် ယူနီဖောင်းကို ပြောင်းလဲ ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူကရိန်းလိဂ်မှာ ကစားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားတွေဟာ နီးစပ်ရာ နိုင်ငံတွေထဲကို ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး ယူကရိန်း ကစားသမားတွေ ကတော့ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်းက ယူကရိန်း ကစားသမားတွေ ကတော့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ပေးမယ့် သူတွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်း ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုင်နမိုကိဗ်အသင်း နည်းပြကတော့ ရိုမေးနီးယား နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကလည်းပဲ သူ့ရဲ့ မိခင်တိုင်းပြည်ကို မပြန်ဘဲ ယူကရိန်း မှာသာ ဆက်လက် ရှိနေကာ သူက သူရဲဘောကြောင်သူ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒိုင်နမိုကိဗ်နည်းပြ မာဆီယာလူဆက်ကူဟာ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ်ရှိ နေပြီဖြစ်ပြီး ဒီစစ်ပွဲကို ဆန့်ကျင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါ သူ့ တပည့်ကျော်တွေကလည်း ဘောလုံးကန် ဖိနပ်တွေကို စွန့်ကာ သေနတ်ထမ်းပြီး အမိမြေကို ကာကွယ်ပေးမယ့်သူ တွေအဖြစ် ရှိနေခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ Credit
Previous Article ခရုဟငျး ခကျြစားရာမှ ခရုထဲကဒျေါလာ၁ဘီလီယံတနျ ပုလဲလုံးကွောငျ့ နခေ့ငျြးညခငျြး ခမျြးသာခဲ့တဲ့ မိသားစု
Next Article စငျကာပူမွို့‌တျောမှာရှိတဲ့ မွနျမာအမညျနဲ့ လမျးမြား …